Karazana fomba fanamboarana lasibatra firaka titanium-aluminium vaovao
Amin'izao, ny zava-maniry lehibe famokarana kendrena lehibe eran'izao tontolo izao dia mampiasa fomba roa samy hafa hanamboarana tanjona kendren'ny firaka aluminium. Namboarina tamin'ny famolavolana famafazana, mandritra ny famokarana lasibatra firaketana alimina alimika, ny fanampiana ny singa alloying dia matetika miteraka fisarahana amin'ireo lasibatry ny firongatry ny aliminioma, izay mahatonga ny kalitaon'ny horonan-tsary hampahantra kokoa ary ny tampon'ny tanjona kendrena dia mora mamokatra sombiny bitika, izay hisy fiatraikany amin'ny fitovian'ny toetran'ny sarimihetsika. Raha ny lasitra alim-bary alim-by alimina dia vita amin'ny alàlan'ny fomba famafazana spray, na dia azo sorohina aza ireo fatiantoka mifandraika voalaza etsy ambony, io dia hahatonga ny tanjona kendrena. Nampitomboina be ny vidin'ny famokarana, indrindra rehefa manao tanjona kendrena izay tsy mora tohina ary tsy maintsy mampiasa fitoviana mafana, hampitomboina ny vidiny noho ny fampiasana fitoviana mafana.
Mba hahamora ny fizotry ny famokarana lasibatra firaka titanium-aluminium sy vidiny ambany kokoa, ity misy fomba iray anaovana lasibatra firaketana alimina alimina amin'ny vovo-tsiranoka entona. Raha ampitahaina amin'ny vovo-dronono amin'ny tanjona kendrena, sivana ny vovo-firaka mba hahazoana ny haben'ny vovo-paosy sahaza azy, ary farany ny vovoka dia voasiaka mafana hanery ny lasibatra alim-bary alim-bary alim-bary vita amin'ny firaka aliminioma. (aluminium-chromium, aluminium-silika-varahina, aluminium-titanium, Sns). Ny dingana fampiharana fampiharana dia: manomeza akora vita amin'ny vy amin'ny fanatanterahana lasibatra fampidirana firaka aliminioma ary atsonika ho metaly metaly; dia, ampiasao ny fomba famafazana entona hamoahana vovoka vy amin'ny metaly metaly; Farany, manafana ny vovo-by amin'ny vovoka Namboarina ho lasibatra alim-bary alim-bary, ary mandalo entona tsy mitohana ho toy ny entona miaro. Ity fomba ity dia afaka misoroka ny lesoka amin'ny fisarahana ara-nofo sy ny mikroparticle, ary ataovy haingana sy mora kokoa ny tanjon'ny sputter avo lenta.
Précédent: Momba ny spray spray termal Rotting target
Manaraka: Azavao ny fahalalana ny sputtering target medium medium magnetron sputtering